IZITYALO EZIBOMVU ZANGAPHAKATHI (IINDIDI KUNYE NEENGCAMANGO ZEZINDLU) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Izityalo ezibomvu zangaphakathi (Iindidi kunye neengcamango zezindlu)
Nasi isikhokelo sethu kwizityalo ezibomvu zangaphakathi kubandakanya iintlobo ezithandwayo zezityalo zendlu ezinamagqabi abomvu, ubungakanani obuncinci kunye neendidi zeentyatyambo. Izindlu ezinemibala zithathe i-intanethi ngoqhwithela. Iiwebhusayithi zosasazo zasekuhlaleni, iibhlog zophuculo lwasekhaya, kunye nabantu abathanda ukutsalwa kwezindlu ngokufanayo baqhayisa ngeefoto eziqaqambileyo, ezintle ezibomvu ezomeleza ukubonakala kwalo naliphi na igumbi.
Xa sele zithandwa ngeminyaka yee-1970, izityalo ezibomvu ezibomvu zenza ukubuya kwazo okukhulu, kwaye akukho mntu ufuna ukuphoswa.
Iindidi ezaziwayo zezityalo ezibomvu
Isityalo sePolka Dot
I-Emerald ebomvu uPhilodendron
Izityalo zeNdlu ebomvu
Izityalo ezincinci zeRed House
Izityalo ezibomvu zangaphakathi
Ngelixa kukho imibala emininzi ebomvu yokujonga, zininzi iintlobo onokukhetha kuzo. Nokuba indawo yakho ifuna into ende, into encinci, okanye into engacacanga konke konke, zininzi iindlela onokukhetha kuzo, kwaye ubuncinci kuzo ziya kulunga ngqo kwi-décor yakho!
Jonga ezi zityalo ziphinde zaphinda zathandwa.
Nangona kunganyanzelekanga ukuba ibe sisiqalo sabazali bezityalo, ezi ntlobo zincinci ze-begonia ziyaziwa ngemibala yazo yesilivere, ebomvu, nemfusa, nangona umthunzi ngqo uxhomekeke ngqo kwi-subspecies kunye nobungakanani belanga elifumana isityalo.
Ukuqinisekisa ukuba amagqabi ahlala abomvu ocacileyo, zama ukuyibeka kwindawo enelanga kakhulu ekhayeni lakho, kufutshane nefestile ejonge eMpuma, apho izakufumana yonke imitha efunekayo ukugcina ukukhanya.
Imnandi nje ngendlela evakala ngayo, isityalo sepolka siyathandwa kuyo yonke indawo ngenxa yeepateni zayo ezibomvu ezingenakunqandwa xa kuthelekiswa nemvelaphi eluhlaza.
Kuxhomekeka kwakhona ekukhanyeni okufumanayo ngexesha lasemini, imibala ibonakala naphina ukusuka kwipinki ebomvu ukuya kwimaroon emnyama, ngamanye amagqabi abonisa imibala eyahlukileyo kunenye. Ngokwenene le yeyona nto kufuneka yenziwe ngabaqalayo, njengoko ifuna ukhathalelo olulula kunye nokunkcenkceshela!
Jonga esi sityalo sibomvu semithambo-luvo e Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Esi sesinye isityalo esiza kuzo zonke iintlobo zemibala ukusuka epinki ukuya kwi-maroon enzulu, kodwa ezona ntlobo zidumileyo zezinamagqabi aluhlaza anzulu agqunywe yimithambo ebomvu yeeruby.
Kulula ukuza ngaphezu kwe-begonia, unokufumana izityalo zemithambo-luvo kuyo yonke imibala engena kwiivenkile ezinkulu zebhokisi kunye nakwiivenkile ezitena kunye nodaka ngokufanayo. Ngenxa yokwanda kokuthandwa kwayo, akunakulindeleka ukuba kube nzima kuwe ukufumana okomzuzwana!
Iindawo ezibomvu ezinomtsalane zalesi sityalo ayizizo amagqabi kodwa, kodwa ziziciko zomdiliya otyebileyo wetropiki. Ezi izityalo zokucoca umoya Kufuneka indawo ethe kratya kunezinye iindidi zezityalo.
Ngokwenene amagqabi aluhlaza anzulu entwasahlobo asuka kobona bunzulu bendalo ebomvu enokuba ikhe yavelisa, kwaye xa kufika ixesha lokuthena, qiniseka ukuba awuyicimi ngaphezulu ikhaphethi emhlophe- incindi ikwangumthunzi obomvu ocacileyo!
Ngaphandle kwezona ntlobo zixhaphakileyo zidweliswe apha ngasentla, kukho izityalo ezimbalwa ezingakhazimli ngeepateni okanye ngamabala, kodwa ngamagqabi abomvu agcweleyo. Ezi zityalo, ngenxa yee-hues zazo, ngokubanzi zifuna ukukhanya kwelanga ngakumbi kunendawo yakho yokutshala indlu. Oko kuthethiweyo, jonga ezi zityalo zongeza umbala ocacileyo kwindawo ekungqongileyo!
Uhlobo lokhathalelo olulula kakhulu, i-coleus ikhetha ukubekwa kwindawo apho iya kufumana ukukhanya kwelanga. Iindawo ezifanelekileyo zibandakanya iifestile zasekhitshini kunye neebhalkhoni, kodwa ukuba kuyabanda kakhulu, kungafuneka bangene ngaphakathi kwaye bancediswe ngokukhanya okungekuko.
Ngaphandle kweemfuno zokukhanya, esi sityalo sikhazimla kwimibala eyahlukeneyo eqaqambileyo ukuya kobomvu ngokunzulu kwaye sinokunqunyulwa sivelise ezinye izityalo (yay!).
Nangona ibekwe ngaphakathi, i-croton ngokubanzi ibonisa iipateni ezibomvu neziluhlaza, amagqabi azo angenisa kwisibonisi esibomvu xa sifumana ukukhanya okwaneleyo. Amagqabi asezantsi ahlala egcina umbala omthubi-ukuya-orenji ukuya kobomvu, ngelixa amagqabi amatsha eza kukunika umbala obomvu onqwenela wona.
Ngubani umfazi wesibini ka-donald trump
Amanzi amaninzi athetha ukukhula kwesi sityalo; yigcine amanzi, kodwa ungagxili emanzini, ukuze ikhule ngokukhawuleza ifike ngokukhawuleza.
Kukho iitoni zemibala efumanekayo kwi-anthuriums- nantoni na evela emfusa ukuya kumhlophe ukuya kwilipstick ebomvu inokufumaneka! Amagqabi amatsha avele njengesiqu sosana oluhlaza, kodwa akhawulezisi afike kubuhle obunemibala eqaqambileyo obonwa ezivenkileni nje ukuba bafumane ukukhanya okuninzi kunye namanzi.
Ezi zityalo zii-epiphyte, nangona kunjalo, ke qiniseka ukuba ukhetha isixhobo sokutyala esinamanzi amaninzi ukuze iingcambu zibe negumbi lokuphefumla.
Kunzima ukufumana izityalo ezihlala zincinci, singasathethi ke ngezinto ezincinane zendlu ezinemibala eqaqambileyo ezinje ngobomvu kunye neeorenji. Nangona kunjalo, ngokucheba okufanelekileyo kunye nokutyala okulingeneyo, nantoni na enokwenzeka. Nazi izityalo ezimbalwa ezigcina imibala yazo intle kwaye incinci ukuba ilingane ngaphakathi kwendawo yakho efanelekileyo.
Lo mnandi mncinci unokuhlala kwizityalo ezincinci kakhulu, kwaye uza phantse kuwo wonke umthunzi womnyama!
Ukufumana imibala elungileyo kunokuba lula njengokujonga ivenkile yezityalo kwi-Intanethi okanye ukumisa kwindawo yokugcina abantwana encinci kufutshane; apho kuthengiswa khona izityalo, kukho i-echeveria. Esi sisityalo esikhathalela lula, ngokunjalo, esifuna amanzi amancinci okanye ulondolozo.
Le yenye yezinto ezikhethiweyo ezinombala wakho, ezaziwa njenge-hen-and-chick. Ngokubanzi, imibala ebomvu eqaqambileyo iphinde ixhomekeke kwiimfuno zokukhanya, kodwa ezinye iintlobo zikhuliswa nje ngaloo ndlela.
Ungasifumana esi sityalo sincinci ngemibala eqaqambileyo ebomvu, eorenji, kunye nepinki! UJade Rose okanye uRubin oBomvu ziindidi ezimbini ezinemibala ebomvu. Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko jonga igalari yethu kwi iintlobo zecactus yangaphakathi .
Esi sityalo simangalisa ngokwenene. Kukho iintlobo ezibomvu, ezimfusa, kunye neelekese ezinemizila ezikhoyo ezikhoyo, zisenza kube lula ukuba nemibala emininzi yesityalo esinye ngaphandle kokugqitha.
Ezi zityalo zincinci, kuba zifuna ixesha lokulala, kodwa ukulinda kufanelekile ngamahlamvu, ukuba unomonde kunye nesithupha esiluhlaza.
Ngokuqinisekileyo, phantsi kwezinto ezimnandi ngokwenene! Ngelixa amagqabi abomvu ehlala ekhetha ukukhetha, kukho iintlobo ezininzi zezityalo ezineentyatyambo eziqaqambileyo, ezinobomi ezinamagqabi abomvu, iintyatyambo ezibomvu, okanye zombini!
Nazi iintlobo ezimbalwa ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kodwa kuba ezi ziya kuba lulondolozo oluncinci, qiniseka ukwenza uphando ngaphambi kokuba uthenge.
iqebengwana lekhekhe kunye neseti yeseva
Owu, ixesha leholide. Ungasifumana esi sityalo phantse nakowuphi na umthengisi, nkqu nakwiivenkile ezimbalwa ezilula. Kodwa musa ukuvumela ukubakho kwamaxesha kwezi zityalo kukuhlise- ziyafumaneka kwi-Intanethi kwihlabathi liphela, kwaye unokufumana imibala eyahlukileyo kunye neepateni ongazange wazibona ngaphambili!
Ewe, ezo zityalo zi-spiky kuzo zonke iivenkile ezinamanzi zizele ngamanzi. Abantakwenu beepinapples, i-bromeliads ziyafumaneka ngokoqobo kwiitoni zeeon shades, ukusuka kwipinki eshushu ukuya kwielekese iapile ebomvu kwimivumbo kunye nemigca.
Bayakuthanda ukuhlala kunye, ke zama ukufumana iintlobo ezimbini okanye ezintathu kwaye uzityale kwisityalo esinye ukuze ukhangeleke ngokwenyani.
Ngelixa uninzi lweentlobo zantlandlolo ezizalelwa eHawaii zithwala amagqabi aluhlaza kuphela kunye neentyatyambo ezibomvu eziqaqambileyo, uninzi lweebhastri zifunyenwe zithwala amagqabi abomvu nepinki, kunye neentyatyambo eziqaqambileyo.
I-Aussie Queen ngumzekelo othandwa kakhulu yenye yezona ntlobo zinemibala eqaqambileyo ekhoyo, kwaye ingafunyanwa kubalimi abakhethekileyo kunye neengcali zetropiki.
Ukufumana umxholo onje ngolu tyelelo kwiphepha lethu Izityalo zendlu ezifana nelanga .
Izimvo zepati ye-bachelorette austin tx
unxiba ntoni kwishower yomtshato
izimvo zegrabile ngasemva kwendlu
isipho se-5 yr isikhumbuzo